Liberia: Ny fiandohana sarotra ho an’ny tontolon’ny blaogy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Jolay 2018 7:22 GMT
Sarotra ny maminavina toerana iray izay tena sarotra kokoa ny fitazonana blaogy noho ny any amin'ny firenena izay tsy misy fizarana herinaratra ho an'ny daholobe fotsiny tsotra izao [amin'ny teny anglisy avokoa ireo rohy rehetra]. Fa ireo liberiana mitsiriritra ny ho mpanao gazety mazoto kosa dia miasa mafy mba hanjohy an'ireo mpanao gazety sy blaogera mpiara-miasa aminy any Kongo (RDC), Oganda, Zambia, Ivoara, Borkina Faso sy Nizeria any amin'ny sisintanin'ny haino aman-jery afrikanina vaovao. Vao haingana izahay no niresaka tao amin'ilay lisitry ny fandefasan'ny RisingVoices ny zavamisy hoe tsy afaka ho ny rehetra mandray anjara amin'ny fandaharanasa iray fampiofanana momba ny haino aman-jery vaovao no ho lasa mpitoraka blaogy. Toy ny tsy ahafahantsika miandry ny hahatongavan'ny mpianatra rehetra mitendry piano ho mpiangaly mozika dia tsy afaka ny ho lasa blaogera manan-talenta avokoa ny rehetra. Kanefa ireto liberiana mpanao gazety manaraka ireto, dia azo antoka fa tena izy:
Mpanao gazety an-tsary miasa ho an'ny Misionan'ny Firenena Mikambana ao Liberia i Emmanuel Tobey (na koa hoe ”Tango”).
Ao anatin'ny lahatsary manaraka, manazava ny fomba nahitany ny fanaovana gazety an-tsary nandritra ny ady an-trano tao Liberia i Moses Togban .
Mety i Nat Bayjay angamba no mpandray anjara navitrika indrindra tamin'ilay atrikasa fampiofanana momba ireo haino aman-jery vaovao tao Liberia. Ao amin'ny blaoginy manokana, efa nizara lahatsoratra roa mitsikera sahady i Nat: ” Cleaning The Capital of Africa's Oldest Republic” (Fanadiovana ny renivohitry ny repoblika antitra indrindra ao Afrika) ary ”Intensive Labor Malpractices at Guthrie [Rubber Plantations].” (Ny fomba ratsy amin'ny fiasana be loatra ao Guthrie [fambolena caoutchouc])
Nanokatra blaogy fanindroany ihany koa i Nat momba ny fomba fiainana sy ireo fampisehoana Entertainmentlib, izay mampahatsiahy ilay blaogy tena malaza be amin'ny teny swahili ao Tanzania, Bongo Celebrity. Ao amin'ilay lahatsoratra voalohany, manolotra ilay vehivavy liberiana mpihira gospel, Kanvee Gains, izy.
Mpianatra ao amin'ny Departemantan'ny Fifandraisana ao amin'ny Oniversiten'i Liberia i Varney Karneh . Miresaka momba ny fikaonandoha iraisam-pirenena vao haingana mikasika ny toe-piainan'ny vehivavy sy ny fanomezana fitaovana fakana sary sy informatika avy amin'ny Oniversiten'i Syracuse (Etazonia) ho an'ny departemantany any amin'ny Oniversiten'i Liberia izy ao anatin'ny lahatsoratra nosoratany.
Nanome kisarisarin'ny endriky Varney tao amin'ny blaoginy ilay mpanao gazety an-tsary Kathleen Flynn.
Mpianatra ao amin'ny Oniversiten'i Liberia i Denna Gibson ary manonofy ny ho lasa mpanao gazety momba ny fanatanjahantena. Nanoratra mikasika ny tsy fahampian'ny fanampiana ireo vehivavy mpilalao baolina kitra ao Liberia sy ny harefon'ny Ligy nasionaly liberiana ho an'ny baolina kitra izy hatreto.
Mpianatra mpikatroka ary mpilatsaka an-tsitrapo ao amin'ny sampana liberiana an'ny Amnesty International i Titus sy i Prince Tokpah . Samy mavitrika eo anivon'ny Project Ceasefire (Tetikasa ajanony-ny-tifitra) avokoa izy ireo, izay tohanan'ny Rising Voices ara-bola ary tarihin'ilay mpanao gazety Ruthie Ackerman.
Samy manana ny firehetampo, antony manosika ary ny talenta voajanahariny avokoa ireo blaogera rehetra ireo mba ho mpisava lalana ny tontolon'ny blaogy vao miana-mandeha ao Liberia. Fa mbola goavana ireo sakana tsy maintsy ho atrehin'izy ireo. Tena lafo be ny cybercafe, izay miasa amin'ny alalan'ny mpihary herinaratra mandany solika, ary mbola mitaredretra be ny fidirana amin'ny Aterineto. Fanampin'izany, tsy maintsy miasa mafy ireo liberiana mba tsy ho very asa (raha manana izy ) noho ny tahan'ny tsy fananana asa izay manodidina ny 80 isan-jato. Na izany aza, miaraka amin'ny fankaherezana sy fanampiana ampy tsara, afaka miditra aminà toko vaovao, ny vanim-potoanan'ny haino aman-jery vaovao i Liberia.